Hukama huripo pakati pehuchenjeri hwemvura nehutungamiriri mabasa | Kufungisisa Kudzidziswa
Isu tataura kare mune dzinoverengeka zviitiko zve ruzivo and of mabasa makuru, kunyange kutsanangura kutsvagurudza kungadai kwakaunza pachena mimwe misiyano yakakosha.
Panguva imwecheteyo, zvakadaro, hazvidziviriki kucherechedza imwe nhanho yekupindirana pakati petsananguro dzezvivakwa zviviri zvedzidziso; semuenzaniso, kuronga uye kugadzirisa matambudziko hunyanzvi zvinoshandiswa nenzira dzakasiyana siyana mukufungidzira uye kutsanangurwa kwemabasa ekuita. Nekudaro, hunyanzvi uhu huviri kazhinji hunobatsira kutsanangura hunhu hwatinowanzo tsanangura se "hungwaru".
Tichifunga nezvekufanana uku pakati pehungwaru nemabasa epamusoro, zvine musoro kutarisira kuti ekare angave akafanofungidzirwa nechidimbu. Mune mamwe mazwi, isu tinofanirwa kutarisira kuti sekuita mumiyedzo kuyera masimba emabasa kunowedzera, pane kuwedzera kwezvibodzwa mukuyedza kuongorora ungwaru.
Nekuremekedza bvunzo dzemabasa makuru, vanyori vakati wandei vanotaura kuti bvunzo dzinovaongorora kuburikidza nemabasa akaomesesa (semuenzaniso, iyo Wisconsin Kadhi Sorting Bvunzo kana the Shongwe yeHanoi), Ivo havana kuvimbika uye kushanda. Imwe yemiedzo inozivikanwa yekuyedza kudzamisa dambudziko iri ndeyeyaMiyake nevashandi avo vakaedza kupaza masimba ekuita muzvinhu zviri nyore uye, chaizvo, vatatu:
kugadzirisa kwe kushanda ndangariro;
Kubudikidza nechidzidzo chakakurumbira chakaitwa pavakuru-veyunivhesiti-vakuru, ivo vaongorori vakaratidza kuti hunyanzvi uhu hutatu hwakabatana sei asi zvakare hunogona kunge hwakaparadzaniswa, zvichiratidzawo kuti vaizokwanisa kufanotaura mashandiro mumabasa akaomesesa (semuenzaniso, Shongwe yeHanoi and the Wisconsin Kadhi Sorting Bvunzo).
Duan uye vatinoshanda navo muna 2010 vakasarudza kuyedza iyo Miyake modhi zvakare mune yekukura zera uye, chaizvo, mune vanhu vane makore ari pakati pegumi nerimwe kusvika gumi nemaviri makore. Chinangwa ichi chaive chekucherechedza kana kurongeka kwemabasa makuru kwaive kwakafanana neizvo zvakawanikwa muvakuru, ndiko kuti, zviine zvinhu zvitatu (kuvharidzira, kugadzirisa kwekushanda ndangariro uye kushanduka) zvine hukama kune mumwe nemumwe asi zvichiratidzika kunge zvinoparadzaniswa.
Chimwe chinangwa chaiva fungidzira kuti huchenjeri hwemvura hwakatsanangurwa sei nevakuru mabasa.
Kuti uite izvi, vanyori vekudzidza vakaisa vanhu makumi matanhatu nevatanhatu kuongororwa kwepfungwa kuburikidza Inofambira mberi matrices eRaven, uye kuongororwa kwemabasa ekuziva muzvinhu zvitatu zvataurwa.
Nezve chinangwa chekutanga, mhedzisiro yakasimbisa chaizvo zvinotarisirwa: izvo zvitatu zvakayerwa zvikamu zvehutungamiriri mabasa zvakabatana asi zvichiri kupatsanurwa, nekudaro ichidzokorora, muvanhu vadiki kwazvo, mhedzisiro yakaburitswa makore gumi apfuura naMiyake nevashandi.
Nekudaro, pamwe zvinotonyanya kufadza ndezve izvo zvine chekuita nemubvunzo wechipiri: ndezvipi zvikamu zvemabasa makuru zvakatsanangura zvibodzwa zvine chekuita nehungwaru hwemvura zvakanyanya?
Anenge miedzo yese yemabasa makuru yakaratidza kuwirirana kwakakosha (ivo vaifarira kuenda vakabatana) nezvibodzwa mukuyedza kwepfungwa. Nekudaro, ne "kugadzirisa" zviyero zveyero yekudzokorora kuwirirana pakati pekudzivirira, kuchinjika uye kugadzirisa kwekushanda ndangariro, ekupedzisira chete ndiwo akasara akabatana zvakanyanya nehungwaru hwemvura (kutsanangura nezve 35%).
Kunyangwe ichiwanzo kuverengerwa, ungwaru nemabasa epamusoro anoenderera mberi achionekwa seakaumbwa maviri edzidziso (kana, zvirinani, bvunzo dzinoshandiswa kuongorora imwe kana imwe kuvaka inoita kunge inoyera masimba akasiyana). Zvisinei, kuvandudzwa kwekushanda ndangariro kunoratidzika kuve chinhu chemabasa epamusoro chakabatana zvakanyanya nehungwaru. Nekudaro, tisati tazvinyengedza kuti mubvunzo uri nyore (pamwe uchifungidzira kuti ndangariro yakaderera inoshanda inoenderana nehungwaru hwakaderera uye zvinopesana), zvakakodzera kuti uzive kuti mune mamwe masampuli asiri e "avhareji", zvinhu zvinowedzera kuomarara. Semuenzaniso, mune mamwe matambudziko ekudzidza, kushanda ndangariro zvikoro hazviite kunge zvine hukama neIQ. Naizvozvo zvakakosha kufunga nezve data kubva kuongororo iyi sechikafu chakakosha chekufunga, asi uchiramba wakangwarira pane kumhanyira kumhedziso.
Chii chinonzi kungwara uye mashandiro eIQ anoshanda
Zvipo vana: kusiyanisa pakati pehungwaru nemabasa makuru
Ko nhanho yedzidzo inokanganisa huwandu hwehungwaru here?
Yakakura yekuziva inogona uye chaiyo yekudzidza matambudziko
Uchenjeri, kutarisisa uye kuita kwedzidzo: chii chinonyanya kukosha?
Mimhanzi, kungwara uye mabasa makuru
Wedzera Kushanda Ndangariro Kuti Uwedzere Njere: Zvinoshanda Chaizvoizvo here?
Kufunda mimhanzi kunoita kuti uve nenjere here?
Duan, X., Wei, S., Wang, G., & Shi, J. (2010). Hukama huripo pakati pehutungamiriri mabasa nehungwaru pane vane makore gumi nerimwe-kusvika gumi nemaviri ekuberekwa. Psychological Bvunzo uye Kuongorora Modeling, 52(4), 419.
Giofrè, D., & Cornoldi, C. (2015). Maumbirwo ehungwaru muvana vane hurema hwekudzidza akasiyana kana achienzaniswa neanowanzoitwa vana ekukura. ruzivo, 52, 36-43.
mabasa makuru, ruzivo, njere uye Executive mabasa, kushanda ndangariro, kushanda ndangariro uye kungwara, kushanda ndangariro uye IQ, qi
Hukama huri pakati pehuchenjeri hwemvura nemabasa makuru2021-08-222021-08-22http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/08/la-relazione-tra-intelligenza-e-funzioni-esecutive.jpg200px200px
"Programming" Executive mabasa: mhedzisiro yekukodha pakuronga nekudzivirira muzera rechikoroExecutive mabasa, Executive mabasa, Neuropsychology, Uncategorized
Kutonhora uye kupisa mabasa makuru: chii chavanofanotaura chakasiyana kubva kune mumwe nemumwe?Zvinyorwa, Executive Mabasa, Executive Mabasa, Kushanda Memory